IQ Option FX Options ကို | အတူအမြတ်အစွန်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ် Start IQ Option - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
IQ Option FX Options ကို - သင်သိရန်လိုအပ်အားလုံး
IQ Option FX Options ကို - နိဒါန်း
FX Options ကိုကဘာလဲ?
အတူစတင်အသုံးပြုခြင်း IQ Option FX Options ကို
ယူဆရင်သင်ပြီးသားသင်၌ရောင်းဝယ်ဖောက်ချင် FX ငွေကြေးကို pair တစုံကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ ထိုအခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ။
FX Options ကို၏ကောင်းကျိုးများ
ပါဝင်သည် 14 ငွေကြေးအားလုံး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုကန့်သတ်ထား Unlimited အမြတ်အစွန်းအလားအလာများနှင့်ဆုံးရှုံးမှု
$ 1 သကဲ့သို့အနိမ့်နှင့်အတူအရောင်းအ Enter
FX Options ကို၏ဆိုးကျိုးများ
သာ FX ငွေကြေးအားလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
သငျသညျ FX Options ကိုကုန်သွယ်မှုသငျ့သလော
Cryptocurrencies ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာပူတူရိယာခဲ့ကြပြီ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုရှိခြင်းအားလုံးနီးပါးပလက်ဖောင်းနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ထွက် evened သိရသည်။
IQ Option လွယ်ကူကုန်သည်များတိုတောင်းသောသက်တမ်းအရောင်းအပေါ်ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းရစေဘို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ပြန်လာန့်အသတ်သည်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏထက်မပိုနိုင်မည့်ကုန်သွယ်ရေးစဉ်းစားပါ။ သင်သည်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်သို့မဟုတ်, သင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်ပိတ်ပြီးနိုင်ပါတယ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစဉ်းစားပါ။
ဤရွေ့ကားဖြစ်နိုင်ခြေယခုမှကျေးဇူးတင်စကားတစ်အဖြစ်မှန်များမှာ IQ Option FX Options ကိုဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ။
ဒါဟာပါးန Forex ကုန်သွယ်နှင့်အတူရွေးချယ်စရာပေါင်းစပ်အသစ်တစ်ခုတူရိယာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Options ကိုသငျသညျတခုပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာ fixed စျေးနှုန်းထက်မြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းရှိလိမ့်မည်ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းလျှင်, သင်ထားတဲ့စျေးနှုန်းအပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့စေပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျမှားယွင်းခန့်မှန်းလျှင်, သင်သာသင်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့မဟုတ်ဘဲမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူကုန်သွယ်ခြင်းထက်, FX Options ကို သာသင်ကလူကြိုက်အများဆုံးငွေကြေးအားလုံး၏ 14 နှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားသည်။
ဤသည်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဟာပေါ်မှာရှိသမျှ Non-ဥရောပကုန်သည်များမှရရှိနိုင် IQ Option ပလက်ဖောင်း။
ဒါကြောင့်အီးယူကုန်သည်များအတွက်ဖြန့်ချိမယ့်ပြီးတာနဲ့ FX ရွေးချယ်စရာ ESMA စည်းမျဉ်းများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီလက်နက်နှင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်, ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ကို log ။ သင်နှင့်အတူကုန်သွယ်ချင်သောငွေကြေးကို pair တစုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ drop-down list ကိုတွင်, '' ရွေးချယ်မှုများ '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါစာရင်းထဲတွင် FX အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ FX Options ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ကိုဘယ်လို
သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာဘယ်နေရာမှာမဆို 1 မိနစ်နှင့်5မိနစ်အကြားနိုင်ပါတယ်။
ယင်းသပိတ်စျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဇယား၏ညာဘက်မှအဖြူရောင်သေတ္တာများကပြသနေသည်။ အဆိုပါသပိတ်စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာရိုးရိုးစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ FX စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာသပိတ်စျေးနှုန်းထက်မြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းရှိလိမ့်မည်ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ခန့်မှန်းပေါ် မူတည်. ပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောင့်ပြီးတာနဲ့အနီရောင်ဒေါင်လိုက်လိုင်းသည်သင်၏ဇယားပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ဖော်ပြသည်။ စျေးနှုန်းဂရပ်ဒီမျဉ်းရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ချက်ချင်းသင်တစ်ဦးကငွေကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်မင့်ခြင်းရှိမရှိသိကြပါလိမ့်မယ်။
ထိပ်ဖျား: မြင့်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း button ကိုအထက်ပျံဝဲလျှင်, အမြတ်အစွန်းစကေးပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်မြျှောလငျ့နိုငျဘယ်လောက်အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်အရှုံးပြသည်။
အရှုံးအနီရိပ်အားဖြင့်ညွှန်ပြနေစဉ်အလားအလာအမြတ်အစိမ်းရောင်ရိပ်တို့ကညွှန်ပြနေသည်။ အမှုအရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရဘယ်မှာဤတွင်ပါပဲ။ ဆုံးရှုံးမှုသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုကန့်သတ်ထားနေစဉ်အမြတ်အစွန်း 300% ထက်ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။
နေဆဲအတော်လေးသစ်ကိုဖြစ်သော်လည်းဤတူရိယာမှထင်ရှားစွာကွဲပြားခြားနားကြသည် ရိုးရာ binary options များ FX ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်ပုံမှန်နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုပါလိမ့်မယ်။ အားသာချက်များအချို့မှာအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့ကိုကုန်သွယ် FX, binary options နဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပတ်သက်. ရိုးရှင်းတဲ့သဘောတရားနားလည်အဖြစ်, သငျသညျအငြိမ့် FX Options ကိုအတူကုန်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး IQ Option သငျသညျပြီးသားပလက်ဖောင်းပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေလျှင်အကောင့်။ ထို့အပြင်ဤ
တူရိယာ desktop ကို browser များသို့မဟုတ်တဆင့်လက်လှမ်းများမှာ IQ Option စမတ်ဖုန်း app များကို။
ကျွမ်းကျင်သူကုန်သည်များများသောအားဖြင့်အနည်းငယ်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဒါဟာသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနှင့်ရာပေါင်းများစွာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလက်တဆုပ်စာအပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေဖို့လွယ်ကူနေပါပြီ။
FX ငွေကြေးအားလုံး cryptocurrencies ကဲ့သို့အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ကိုလည်းနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုအတော်လေးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်မလွယ်ကူဖြစ်ကြပြီး, သူတို့ကအတော်လေးတည်ငြိမ်ပါတယ်။
ကနေရှေးခယျြဖို့အဓိကငွေကြေးအားလုံး၏ 14 နှင့်အတူ, ကုန်သည်များအချိန်အတော်လေးတိုတောင်းသောပမာဏအတွင်းပိုပြီးအနိုင်ရအရောင်းအစေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ကုန်သွယ်မှုနှုန်းအများဆုံးသက်တမ်းကုန်ဆုံး5မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုတောင်းသောသက်တမ်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူဤပေါင်းစပ်နှင့်သင်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွင်းကြီးမားကျယ်ပြအမြတ်အစွန်းအောင်၏အလားအလာတွေ့မြင်နိုင်သည်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်တစ်ခုခုကိုပုံသေမဟုတ်, သင်ဘယ်နေရာမှာမဆို 1 မိနစ်နှင့်5မိနစ်အကြားကြာရှည်ရန်သင့်အရောင်းအသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကကုန်ဆုံးမတိုင်မီနာရီတစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်။
ဘယ်လို 100 မိနစ်အတွင်းတစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုအပေါ် 5% ကျော်အောင်ကော? ဒါကဘာလဲ IQ Option FX Options ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအပေါ်အများစုကအရောင်းအ IQ Option ပလက်ဖောင်း 92% ဦးရေအများဆုံးပြန်လာရှိသည်။
FX Options ကိုထပ်မံအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုနှုန်းသင်သည်န့်အသတ်အမြတ်အစွန်းအလားအလာခွင့်ပြုမယ့်ခြေလှမ်းတတ်၏။ ရိုးရာ FX နှင့် binary options များကုန်သွယ်နှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့ကုန်သွယ်ရေးနှုန်းအဆိုပါအမြတ်အစွန်းအလားအလာ fixed မပေးပါ။
အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးပေါ် မူတည်. သင်အခုတစ်ခုတည်းအရောင်းအပေါ်ကောင်းစွာကျော် 100% ပြန်အောင်၏အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ အဘယျသို့သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းင်သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးဝင်ညာဘက်ရှေ့တော်၌ကုန်သွယ်မှု၏အမြတ်အစွန်းအလားအလာပြသသည်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
နယူးကုန်သည်များကိုမကြာခဏတစ်ခုတည်းအရောင်းအပျေါမှာမိမိတို့တစ်ခုလုံးကိုအကောင့်ဆုံးရှုံးစိုးရိမ်။ FX Options ကိုဆုံးရှုံးမှုကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောငွေပမာဏကန့်သတ်ကြသည်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးရှုံးနိမ့ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်များအဖြစ်သင့်တစ်ခုလုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ dwindles သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မရှိကြပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့အားသာချက်ကဒီကရှင်းပြသည်။
တခါတရံမှာ, သင်အမှားကကုန်သွယ်ရေးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားအချိန်များတွင်, သင့်ဟောကိန်းများမှန်ကန်သောမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေတွေမှာ, သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ FX Options ကိုသင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်။
သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါတစ်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းပေါ်သော '' ရောင်း 'ခလုတ်ကိုအပေါ်ရိုးရှင်းစွာကိုကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ခွင့်ပြုပါကလည်းအမြတ်အစွန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သုံးနိုငျပါမညျမသာသင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဆုံးရှုံးအနေအထား reverse နှင့်ရိုက်ထည့်ဖို့မြျှောလငျ့ပါလျှင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒီသစ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်း IQ Option နေဆဲသင်ကဲ့သို့နည်းနည်းအဖြစ် $ 1 နှင့်အတူအရောင်းအဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ နိမ့်ဆုံးအကောငျ့ကိုသိုက်နေဆဲ $ 10 နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါက join ဖို့လွယ်ကူစေသည် IQ Option ပလက်ဖောင်းနဲ့အကျိုးအမြတ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ပါ။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မြင့်ပြန်လည်းလွယ်ကူအချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုတည်ဆောက်စေ - သင်ကအတော်လေးသေးငယ်တဲ့သိုက်နှင့်အတူစတင်လျှင်ပင်။
FX Options ကိုကုန်သည်များအချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွက်ကြီးမားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြန်စေရန်အဘို့အကာဆန်းသစ်လမ်းကြောင်းသံသယရှိစရာမလိုပါပါပဲ။ သို့သော်အခြားမည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာနှင့်ဝသကဲ့သို့, အချို့, အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။
ဤသည်တူရိယာသင်သာ Forex အားလုံးအပေါ်ကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ကုန်စည်နှင့်စတော့ရှယ်ယာများကဲ့သို့အခြားပိုင်ဆိုင်မှုပိုနှစ်သက်သူကိုကုန်သည်တွေထွက်ပိတ်။ အဆိုပါငွေကြေးကိုစွမ်းသာ 14 ဖို့ကန့်သတ်ကြသည်။ အဆိုပါထောက်တွင်, ငွေကြေးအားလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့သင်ယူခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ငြိမ်သဘောသဘာဝဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်။
ပေမဲ့ IQ Option တစ်ဦး CySEC စညျးမဉျြးစညျးကမျးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ FX Options ကို Non-အီးယူကုန်သည်များမှသာရရှိနိုင်ပါသည်လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်အမေရိကန်, သြစတြေးလျနှင့်ကနေဒါကဲ့သို့အခြို့သော Non-ဥရောပနိုင်ငံများမှကုန်သည်များစည်းမျဉ်းကန့်သတ်ကြောင့် platform ပေါ်တွင်ကုန်သွယ်မှုမရပါဘူး။ အဆိုပါတူရိယာအီးယူကုန်သည်များမှမရရှိနိုင်ဖြစ်လာသောအခါ, ESMA ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မည်မဟုတ်ပါ။
ကုန်သွယ်ရေးမိနစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြိမ်5ဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဤသည်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းအလားအလာနှင့်အတူကာလတိုအရောင်းအပိုနှစ်သက်သူကိုတစ်ရက်ကုန်သည်များနှာ။ အကျိုးအမြတ်အလားအလာမြင့်မားတဲ့ဖြစ်သော်လည်းအချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွင်းသင့်အကောင့်လက်ကျန်ငွေတစ်သိသာထင်ရှားသောအတုံးဆုံးရှုံးသငျသညျစိတျထဲထားရမယ်တဲ့စွန့်စားမှုဖြစ်လာသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်သင့်ရဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းကိုသင်အာရုံစိုက်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံဒီလောက်စွန့်ခြင်းမရှိဘဲနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေဖို့အနည်းငယ်ငွေကြေးအားလုံးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့သရုပ်ပြအပေါ်ငွေရှာနေပြီးတာနဲ့အခုသင်အမှန်တကယ်အကောင့်ပေါ်တွင်သင်၏ပိုက်ဆံအန္တာရာယ်ပေးနိုင်သည်။
သငျသညျထားပြီးအပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် IQ Option ပလက်ဖောင်း, ဒီသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကျိုးနပ်သည်။ အဆိုပါန့်အသတ်ပြန်ကအစာရှောင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အကောင့်ကိုတည်ဆောက်လိုသူကုန်သည်များအဘို့အကောင်းတစ်ဦး option ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သငျသညျငွေကြေးအားလုံးသို့မဟုတ်ပုံမှန် options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာလျှင်, သင်အတော်လေးလွယ်ကူ FX Options ကိုနှင့်အတူစတင်ရှာတွေ့သင့်တယ်။
သင်ဆဲရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်အသစ်အနေလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤတူရိယာကိုသင်ကိုက်ညီမပေးပေလိမ့်မည်။ အရောင်းအများ၏ကာလတိုသဘာဝအစာရှောင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ဒါဟာသင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဒီလောက်စွန့်မတိုင်မီဤပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြောင်းအကြံပြုပါတယ်။ ဒါကဒီမိုအကောင့်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
သင်ပထမဦးဆုံးနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်လျှင်ကျွန်တော်ကိုကူညီလိမ့်မယ် IQ Option.
ဒီအွန်လိုင်းရွေးချယ်စရာပွဲစားအပြည့်အဝ CySEC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီအခွင့်ပြုထား IQ Option ဥရောပ, အာရှနှင့်ကမ္ဘာလုံး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကနေကုန်သည်များက၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ရန်။
ကျွန်မရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, ပွဲစားကတခြားနိုင်ငံတွေတို့တွင်အမေရိကန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျနှင့်ဣသရေလအမျိုးမှကုန်သည်များကိုလက်ခံမထားဘူး။ ဒါဟာအစအခွင့်အာဏာနှင့်ဓနသဟာယပါပဲ။
အဲဒီနှစျခုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူဤပွဲစားရဲ့ connection ကိုမြင်သာပူဇော်နှင့်၎င်းတို့၏ clients များနှင့်အတူယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့သူတို့ရဲ့အပျနှံပြသထားတယ်။
သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူကုန်သွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအန္တရာယ်ကင်းနှင့်ပင်လျှင်ကြောင်းအာမခံပါတယ် IQ Option ပြိုကျ, သင့်ပိုက်ဆံ recover တချို့လမ်းရှိပါတယ်။
IQ Option အလွန်ကုန်သည်ဖော်ရွေသည်။ ပလက်ဖောင်းအတော်လေးမြန်ဆန်စွာဖွင့်တဲ့ထူးခြားတဲ့ algorithm ကိုအပေါ်သို့တည်ဆောက်ထားသည်။ ဒါဟာအစ browser များ, iOS နဲ့ Android apps များအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာမှတဆင့်လက်လှမ်းပါပဲ။
အဆိုပါကုန်သွယ် interface ကိုလည်းကုန်သည်ဖော်ရွေသည်။ သငျသညျကလွယ်ကူသည်သင်၏ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုပျော်စရာနဲ့ရိုးရိုးအောင်မဟာဗျူဟာမြောက်နေရာချအပေါငျးတို့သ tabs များနှင့်ခလုတ်နှင့်အတူသွားလာရန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
10 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကိုကျော်ထောက်ပံ့ခြင်း, အိုဝါ Option ကိုပလက်ဖောင်းကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများ၏လူများသုံးစွဲနိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးသရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်အကောင့်ဖွင့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါသရုပ်ပြ $ 1000 ကို virtual ငွေသားနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်အကောင့်ဖွင့်လှစ် $ 10 ၏နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်ဘုံက e-ပိုက်ဆံအိတ်အချို့အပါအဝင်အများအပြားငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များလက်ခံခဲ့သည်။
သငျသညျရှေးခယျြစရာကုန်သွယ်အသစ်ဆိုရင်, IQ Option သငျသညျစတင်ရန်အရင်းအမြစ်များကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ကြီးမားစုဆောင်းမှုပေးပါသည်။ ဤသည်အခမဲ့ရယူနိုင်ဖြစ်ကြောင်း (ကိုစာရေးသားနှင့်ဗီဒီယိုနှစ်ဦးစလုံး) လဲ tutorial ပါဝင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, သူတို့ရဲ့ဖော်ရွေဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအသင်းကိုအမြဲကူညီပေးဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေး entry ကိုလည်းအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါဟာယင်းသပိတ်နှုန်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်အဆိုပါသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန် setting များနှင့်တစ်ဦး '' ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု 'သို့မဟုတ်' 'ထား' 'အားမရ, ($ 1 မှ $ 5000) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပမာဏကိုရွေးချယ်ရာတွင်ပါဝငျသညျ။
သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုရိုက်ထည့်မီဝင်ငွေရပ်အဆိုပါအမြတ်ပြသနေသည်။ ပလက်ဖောင်းမှာလည်းန့်အသတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြိမ်ပေးထားပါတယ်။ တာဘိုရွေးချယ်စရာအဘို့စက္ကန့်အနည်းငယ်ကနေစံရွေးချယ်စရာအဘို့အလပေါင်းများစွာဤအကွာအဝေး။
ဤသည်နေ့ရက်သည်ကုန်သည်များနှင့်ရေရှည်ကုန်သည်များနှစ်ဦးစလုံးအတှကျပလက်ဖောင်းသင့်လျော်မှန်ကန်စေသည်။ ပလက်ဖောင်းမှာလည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း, ကိရိယာများနှင့်ဇယား၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပေးသည်။ ဤရွေ့ကားလွယ်ကူအထူးသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အနေအထားသို့ရတဲ့အခါ, မှန်ကန်သောဟောကိန်းများလုပ်ပါစေ။
IQ Option ကျွန်မသန်း 1 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာပူဇော်တွေ့ရှိအနည်းငယ်အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါသစ်ကို FX Options ကိုအတူသငျနှငျ့အတူကုန်သွယ်မှုပိုင်ဆိုင်မှု၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု, FX ငွေကြေး, စတော့ရှယ်ယာ, ကုန်စည်, ညွှန်းကိန်းများနှင့် cryptocurrencies ပါဝင်သည်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အောင်မြင်သောအရောင်းအထိ 92% ၏ထိရောက်သောပြန်လာရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အများဆုံးပွဲစားများကကမ်းလှမ်းပျမ်းမျှထိရောက်သောပြန်လာထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဘယ်သို့ငါသဘောကျတယ်သူတို့ FX Options ကိုဘဏ္ဍာရေးတူရိယာမှတဆင့်န့်အသတ်ပြန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုဖွငျ့ဤထိပ်ဆုံးင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အကောင့်ပြီးသားမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုလျှင်ထုတ်ယူ 24 နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ သင်ကလက်ခံခဲ့သည်ငွေပေးချေမှု processors ကိုမဆိုရန်ဆုတ်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
IQ Option FX Options ကိုနှစ်ဦးစလုံးအသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ excite လိမ့်မည်ဟုအသစ်တစ်ခုကိုဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲစားများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကုန်သည်များမှအနိမ့်ပြန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုရှိရာတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် IQ Option FX Options ကိုအနိုင်ရအရောင်းအပေါ်န့်အသတ်ပြန်ရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးရဲရင့်ခြေလှမ်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
FX နှင့် binary options များကုန်သွယ်နေတဲ့နောက်ခံနှင့်အတူကုန်သည်များအဘို့, ဒီကနေအကျိုးလွယ်ကူသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သင့်သည်။ ဤသည်သို့သော်ကြောင်းလေ့လာသူကုန်သည်များသည်ဤတူရိယာပိုက်ဆံကုန်သွယ်လုပ်မပေးနိုငျဟုမဆိုလိုပါ။
IQ Option သငျသညျအစာရှောငျစတင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်အရင်းအမြစ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရက်ပေါင်းများစွာအတွင်းသင်တက်ရ running နိုင်သည့်တစ်ဦးသရုပ်ပြအကောင့်များနှင့်သင်ယူမှုအရင်းအမြစ်များကိုပါဝင်သည်။
သင်ဆဲဒီတူရိယာသင်တို့အဘို့ရှိမရှိအံ့သြနေပါလျှင်ယေဘုယျအား, ငါသည်ဤဆောင်းပါးကိုသင် FX Options ကိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်လိုအပ်သည့်အလုပ်မလုပ်ပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Tags: FX binary options များ, FX binary options များကုန်သွယ်, FX options များ, FX ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်, IQ binary options များ, iq option ထို binary options များ, IQ Option FX Options ကို, iq options, iq optionbinary options များ s, ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ် IQ, ကုန်သွယ် FX options များ